अन्‍नपूर्ण पोस्ट् | फुर्सद
जन्मेपछि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो रहेछ र होइन पनि रहेछ। वास्तवमा जन्म र मृत्युको अन्तरालमा हामी आफू जे भएका र बनाइएका हुन्छौं, त्यो ज्ञानको अनुभव र अनुभवको ज्ञानले हामीलाई बोध गराउँदो रहेछ। त्यसपछाडि मात्र हामीले जन्म र मृत्युको वास्तविकता थाहा पाएर ढुक्क भएर भन्न सक्दा रहेछौं-जन्मेपछि मर्नु अथवा मर्......
लिभिङ लेजेन्ट: धर्तीकै अम्बर
वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङ भौतिक रूपमा हामीबीच रहेनन्। नेपालको सांगीतिक आकाशमा ठूलो रिक्तता छाडी अम्बरतिर महाप्रस्थान गरे। मृत्युको सन्दर्भमा ९५ प्रतिशतको धारणा छ, मर्दा केही लगेर जाने त होइन। तर विश...
काटिरह्यो समयको धारले समयलाई या हामीलाई। पत्तै भएन। आठवटा वर्षहरू बगिगएछन् हामीलाई छोएर। हो आठ वर्ष हुर्किसकेछ हाम्रो सामीप्य। २०६५ सालको एक गर्मिलो दिन सम्झन्छु। अनि सम्झन्छु त्यो शीतल भेट उहाँको शान...
२०६८ मंसिर २३ गते महाराजगन्ज, धारापाटी। अम्बर गुरुङ निवास। साँझ ५ बजेको छ। निजी निवासमा संगीतकार गुरुङ लोकगीतको यो पंक्ति सस्वर वाचेर सुनाउँदै हुन्छन्। साथमा छौं लोक गायनको तृष्णाले छटपटाइरहेको अञ्जान...
अर्केस्ट्राको अधुरो आख्यान
हाम्रो भेट नभएको धेरै भइसकेको थियो। यस्तैमा एकदिन अम्बर गुरुङ दाइको कल आउँछ। उहाँ भन्नुहुन्छ, 'कता हरायौ ?' म त्यसबेला टिचिङ प्राक्टिसमा व्यस्त थिएँ, मैले त्यही जानकारी गराएँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, 'कुन ठू...
'अम्बर सरलाई फूल चढाउन गइनँ, धुप बालेर रोएँ
सबैले सोध्छन्, 'अम्बर को हुन्?' मलाई निकै अप्ठेरो लाग्छ। खै के भनेर चिनाऊँ ? उहाँलाई चिनाउने मसँग पर्याप्त शब्द नै छैन। मेरो लागि उहाँ असल गुरु, मिल्ने साथी र सधैं ख्याल गर्ने अभिभावक हुनहुन्थ्यो। म स...
सगरमाथाको काखमा (फोटो फिचर)
समुद्री सतहबाट एक हजार पाँच सय मिटरको उचाइबाट पैदलयात्रा सुरु गर्नुथियो, पाँच हजार तीन सय ८० मिटरमा रहेको सगरमाथा आधार शिविरसम्म। काठमाडौंमा स्कुटरमा हिँडिरहेको र उति हिँड्ने बानी नपरेको मप्रति सबै सश...
शंकर लामिछानेको परिचयात्मक निबन्ध-अम्बर गुरुङ
'म अम्बर हुँ तिमी धरती, लाखौं चाहे पनि हाम्रो मिलन कहिल्यै नहोला।' एकचोटि यो गीत मेरो कानमा परेको थियो- कैयन् वर्षअघि। र, अपरिचित अनुहार भएको त्यस व्यक्तिका रचना, संगीत र गायन कौशलले मलाई जकडिहाले।...
अम्बर गुरु कहिल्यै ननिभ्ने तारा
अम्बर र मैले १९५२ देखि सँगै काम गरेका हौं। आर्ट एकाडेमी थियो, अम्बर अध्यक्ष म मूल सचिव। त्यतिखेर संगीतमा उस्तो रुचि कसैसित थिएन। साहित्यिक माहोल भर्खर राम्रो हुँदै थियो। रूपनारायण सिन्हा, अच्छा राई रस...
मेरो घर तुङसुङमा थियो। घरकै बारीमा पिकनिक गथ्र्यौं। अम्बर भाइ सपरिवार आउनुहुन्थ्यो। पछिसम्म एकसाथ काम गरियो, अम्बरसँग मिलेर। दार्जिलिङ हुँदा हामी खुब गफिन्थ्यौं। निकै वर्षको चिनजान थियो। उनी प्यारा मा...